Ungawongeza njani kwaye uthabathe amaqhezu? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Amaqhezu amele iinxalenye ezipheleleyo. Ukusuka kubo unokwenza ukudibanisa, ukuthabatha, ukuphinda-phinda kunye nemisebenzi yokwahlulahlula.
Ukudibanisa nokuthabatha amaqhezu kwenziwa ngokongeza okanye ngokuthabatha amanani, ngokuxhomekeke ekusebenzeni. Ngokubhekisele kwiidinomineyitha, ukuba nje ziyafana, zigcina isiseko esinye.
Khumbula ukuba kumaqhezu, elona xesha liphezulu linani elingezantsi kwaye elingezantsi lelona liphantsi.
1 Kwaye nini iidinomineyini ezahlukileyo?
Kwaye nini iidinomineyini ezahlukileyo?
Xa iidinomineyitha zahlukile, kufuneka uzitshatise. Oku kwenziwa kwi ubuninzi obuqhelekileyo (MMC), ayinanto ngaphandle kwamanani amancinci okwazi ukwahlula elinye inani.
I-MMC ingama-280 ngoba?
Emva kokufumana i-LCM ye-7, 8, kunye ne-5, kufuneka siyihlule ngenani elingaphantsi kwaye siyiphindaphinde ngenani. Ngenxa yoko: 280/7 = 40 kunye 40 * 32 = 1280. Ngokulandelayo, 280/8 = 35 kunye 35 * 19 = 665, ngokunjalo nama-280/5 = 56 no-56 * 23 = 1288.
I-MMC ineminyaka eli-18 ubudala, ngoba?
Emva kokufumana i-LCM ye-9 neye-2, kufuneka siyihlule ngenani elingaphantsi kwaye siyiphindaphinde ngenani. Ngenxa yoko: 18/9 = 2 kunye 2 * 25 = 50. Ngokulandelayo, 18/2 = 9 kunye 9 * 20 = 180, kunye no-18/2 = 9 no-9 * 42 = 378
Kulo mzekelo wokugqibela, senza lula iqhekeza, oko kuthetha ukuba siyanciphisa ngesihluli esiqhelekileyo. Ke ngoko, senza lula iqhekeza ngokwahlula amanani kunye nenani elingezantsi ngenani elifanayo: 248/2 = 124 kunye 18/2 = 9.
Ngaba ufunde yonke into? Vavanya ulwazi lwakho kwi-stomar kunye nokukhupha amaqhezu.
Bona ngakumbi abanye iintlobo de imisebenzi iqhezu kwaye:
Ukuba ukhangela isicatshulwa esigxile kwimfundo yabantwana abasaqalayo, funda: Ukusebenza namaQhezu-aBantwana namaQhezu-aBantwana.